Àkwà mmiri ndị ama ama Rome, si Alcantara ruo Rome | Njem akụkọ
Louis Martinez | | Getaways Europe, Nduzi
E nwere ọtụtụ àkwà mmiri ndị Rom a ma ama Europe dum. N'ezie, ndị Latịn bụ ndị injinia mara mma ma wuo ụzọ gafere n'osimiri ndị dịgidere kemgbe ọtụtụ narị afọ. N'ihi nka ya, anyị ka na-enwe mmasị ịhụ àkwà mmiri ndị a n'ọtụtụ obodo taa. Ma ụfọdụ n’ime ha ka na-eji.
N'ụzọ ezi uche dị na ya, a na-ahụ akụkụ dị mma nke ihe owuwu ndị a ugbu a Italia. Ma e nwekwara ndị dị ebube n'ebe ndị ọzọ e doro ndị ọchịchị roman, na-aga n'ihu, España. Na obodo anyị, ha na-echekwa Ọwa mmiri dị ka nke dị na Segovia ma ọ bụ foduru nke ụlọ Latin ndị ọzọ dị ka ndị Tarragona amphitheater na ọbụna obodo nile dị ka nke Hispalis Seville. Ma n’etughị oge, ka anyị kwuo banyere àkwà mmiri ndị Rom a ma ama. Ọzọkwa, n'ebe ọ bụla ha nọ, anyị ga-eji ohere ahụ mee njem dị mkpirikpi nke ihe ncheta ha ndị ọzọ.
1 Àkwà mmiri Rome nke Alcantara
3 trier akwa
4 verona nkume akwa
6 Akwa Tiberius
7 Rome Bridge nke Merida
Àkwà mmiri Rome nke Alcantara
Anyị na-amalite njem anyị nke nwere ike ịbụ nke a ma ama na Spain. Nke a bụ Alcántara àkwà mmiri, nke dị na obodo Cáceres na otu aha na Osimiri Tagus. Edewo ya n'ihe dị ka afọ 103 mgbe Kraịst gasịrị, ọ ka na-apụtakwa ìhè taa maka ịdị ebube ya.
Ọ bụ ebe mgbaba isii nwere okirikiri dị n'ebe dị elu dị iche iche mejupụtara ya. N'aka nke ya, a na-edozi ihe ndị a na ogidi ise nwere nnukwu buttres. Ọzọkwa, n'etiti ya n'elu ikpo okwu ị ga-ahụ Trajan's arch na n'ọnụ ụzọ ya site n'akụkụ Alcántara e nwere otu obere ụlọ nsọ. Ọnọdụ nchekwa ya zuru oke ga-eju gị anya. Agbanyeghị, eweghachila ya ọtụtụ oge.
Ụlọ a bụ akụkụ nke site na Norba, nke jikọtara mpaghara ahụ na Lusania na, n'aka nke ya, gwara nke a na nke kacha mkpa Via de la Plata. Àkwà mmiri ahụ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ narị mita abụọ n'ogologo na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mita iri isii.
N'aka nke ọzọ, ebe ị nọ na Alcántara, anyị na-adụ ọdụ ka ị na-eletakwa Segura akwa, malitekwa n'oge ndị Rom, n'agbanyeghị na ọ dị umeala n'obi karịa nke gara aga. Ị ga-ahụkwa ụka nke Santa Maria de Almocovar na San Pedro de Alcantara, nke e wuru na narị afọ nke iri na abụọ na nke iri na asaa n'otu n'otu. Ma, karịa ihe niile, echefula ileta nnukwu ụlọ eze na ebe mgbaba yayana ihe dị egwu Convent nke San Benito, ya na nnukwu gallery nke Carlos V na ebe nchekwa ya.
Akwa akwa Gard
Obodo French nke Nîmes Ọ bụ obodo ndị Rom dị mkpa. N'ịbụ ndị ndị Latịn bi n'ihe dị ka afọ 120 BC, ha gbanwere ya ka ọ bụrụ ebe dị mkpa nke nkwukọrịta. Owuwu nke Pont du Gard dabara n'ọnọdụ a.
Isi ọchịchọ ya bụ n'eziokwu na ọ bụghị ihe owuwu kwụụrụ onwe ya, kama ọ na-emepụta nkwonkwo na ndị na-ebu ibu. aqueduct onye butere mmiri n’obodo. E wuru ya na narị afọ mbụ mgbe Jizọs Kraịst nwụsịrị ma nweta aha ya site n'osimiri ahụ ọ na-azọpụta. Ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ narị mita atọ n'ogologo na ihe dị ka mita iri ise n'ịdị elu ma hazie ya na ọkwa atọ.
Dị ka ọchịchọ ịmata ihe, anyị ga-agwa gị na e wuru ya n'ejighị ngwa agha. Nkume ya, nke ụfọdụ dị tọn isii, bụ ihe e ji ígwè kpụọ ọnụ. N'ezie, ọ bụ ọrụ injinia dị mgbagwoju anya nke chọrọ nleba anya dị mgbagwoju anya iji kwado ihe owuwu ahụ mgbe a na-ewu ya. Na nsonye nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu puku ndị ọrụ.
N'aka nke ọzọ, ebe ọ bụ na ị nọ na Nimes, echefula ileta ihe ncheta ndị ọzọ n'oge ndị Rom. N'ime ha, ndị Arena ma ọ bụ amphitheater, nke e wuru n'ime otu afọ ka akwa mmiri ahụ. Na kwa nke Maison Carree, ụlọ nsọ dị egwu, na Ụlọ elu Magna, nke bụ akụkụ nke mgbidi ma dị n'Ugwu Cavalier.
N'ikpeazụ, anyị na-adụ ọdụ ka ị hụ Katidral Basilica nke Lady anyị na Saint Castor, ihe ịchọ mma nke Romanesque (o nwekwara akụkụ Gothic) nke e wuru, kpọmkwem, na ụlọ nsọ Latin ochie.
Otu n'ime àkwà mmiri ndị Rom ama ama: Trier
Nke a Roman àkwà mmiri bụ nke kasị ochie na Germany, dị ka ọ dị na obodo nke Trier, nke dị na steeti Rhineland-Palatinate. Ọ na-agafe osimiri Moselle ma na-achọ ịmata na ọ bụ nke atọ e wuru ebe ahụ n'oge Latin. Na mbụ, e nwere mmadụ abụọ ọzọ a kwatutara iji wuo nke anyị na-egosi gị.
N'ịnọ ọdụ na pilasters siri ike, ọ na-etolite, yana ihe ncheta ndị ọzọ dị n'ime obodo ahụ, otu ìgwè kwupụtara Ebe Ihe Nketa Ụwa. N'ime ndị a, ị nwekwara ike ịhụ ha site na oge ndị Rom dị ka ndị Amọ egwuregwu, las Ụlọ ịsa ahụ nke Imperial ma ọ bụ Pọta Nigra. Ma emesịa dị ka ịmanye Katidral San Pedro ma ọ bụ ụka nke Nwanyị anyị.
Ọ bụghị ihe ijuanya na Trier bụ otu n'ime isi obodo nke ihe a na-akpọ tetrarch. Ọ bụ Diocletian kere nke a ka o duzie alaeze ndị Rom na narị afọ nke atọ ka Kraịst gachara. O nwekwara aha ahụ n’ihi na o nwere ndị eze ukwu abụọ na ndị Siza abụọ.
verona nkume akwa
N'ụzọ ezi uche dị na ya, ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka oge Latin, dị ka anyị na-ekwu, ọtụtụ n'ime àkwà mmiri ndị Rom a ma ama dị na ya. Italia. Nke a bụ ikpe nke akwa nkume Verona, nke e wuru ka ọ gbasaa Osimiri. Ọ tụrụ mita iri itoolu na ise n'ogologo na mita anọ n'obosara ma nwee nnukwu ogige ise.
N'oge ndị Rom, Verona nwere àkwà mmiri asaa, ọ bụ ezie na nkume bụ nanị nke fọdụrụ. Agbanyeghị, obodo Veneto na-enye gị ọtụtụ ihe ịtụnanya ndị ọzọ. Ọmụmaatụ, ihe nkiri roman na ihe nkiri amphitheater, malitere na narị afọ nke mbụ BC ma ọ bụ nke nnukwu ụlọ nke san pedro. N'otu aka ahụ, ị ​​nwere ike ịga na-adọrọ mmasị Katidral, kpuchie ya na mabul ọcha na pink; nke ụlọ elu lamberti, site n'oge ochie, ma ọ bụ na-ewu ewu Basilica nke San Zeno.
Agbanyeghị, Verona ejirila ya ruo mgbe ebighị ebi Romeo na Juliet. A pụkwara ịga leta ụlọ nke ikpeazụ, na mbara ihu ya a ma ama, ọ bụ ezie na eziokwu bụ na, na nke a, akụkọ ihe mere eme ya dabeere na ngwakọta nke fantasy na eziokwu.
Aelius Bridge dị na Rome
N'ime ọtụtụ àkwà mmiri Latin nke ọ na-echekwa Rome nke a bụ, ma eleghị anya, nke kacha mara amara na, n'enweghị obi abụọ ọ bụla, otu n'ime ihe ndị kasị dị egwu. A makwaara dị ka Sant Angelo bridge n’ihi na e wuru ya ka o rute nnukwu ụlọ eze.
N’ihi ya, ọ bụ eze ukwu nyere iwu ka e wuo ụlọ abụọ ahụ Adriano na narị afọ nke abụọ mgbe Kraịst gasịrị. Ọ nwekwara ọtụtụ arcades, ma ihe kacha adọrọ mmasị banyere ya bụ na ọ na-ekpuchi ya na marble travertine. O nwekwara ọtụtụ ihe oyiyi nke ndị mmụọ ozi n'akụkụ balustrades n'akụkụ ya.
Ugbu a, a na-agbagharị ya ma na-enye gị ọmarịcha echiche, kpọmkwem, nke nnukwu ụlọ nke Sant Angelo. N’ọnọdụ ọ bụla, dị ka anyị na-ekwu, ọ bụ nanị otu n’ime ọtụtụ àkwà mmiri ndị Rom dị na Obodo Ebighị Ebi. Anyị na-adụ ọdụ ka ị hụ Cestius akwa, nke Emilio, nke Rickwà na, nke kasịnụ, Neronian, nke jikọtara Champ de Mars na Vatican ma dịkwa egwu.
Àkwà mmiri Taịbiriọs
Anyị na-aga ugbu a na obodo nke Rimini ịgwa gị banyere akwa Taịbiriọs, nke e mechara na narị afọ nke mbụ mgbe Kraịst gasịrị n'okpuru ikike nke eze ukwu nke na-enye aha ya. A kpọlitere ya ịzọpụta osimiri marequia nwere nkume si Istria, ọ bụ ezie na ọ na-egosi na ọ na-akpa ike karịa àkwà mmiri ndị Rom ndị ọzọ.
O nwere oghere semicircular ise na okporo ụzọ abụọ ama ama nke oge malitere na ya: nke Emilia, nke dugara na Piacenza, na popilia, onye na-aga Ravenna. Dị ka ọ dị n’obodo ndị ọzọ, àkwà mmiri ahụ abụghị nanị ihe ncheta ndị Rom na Rimini. Ị nwekwara ike ịga na egwuregwu, site na narị afọ nke abụọ mgbe Kraịst gasịrị, na Akara Augustus, bụ́ nke nwere ọmarịcha ihe oyiyi ọla kọpa nke eze ukwu a, n'ụzọ dị mwute, e bibiri ya.
N'otu aka ahụ, Rimini na-enye gị ihe ncheta ndị ọzọ dị ebube dị ka nke Ụlọ nsọ Malatesta, aha e nyere katidral maka na Segismundo Malatesta wughachiri ya, na nnukwu ala ọma jijiji, nke e dere na narị afọ nke iri na ise.
Rome Bridge nke Merida
Iberibe nke àkwà mmiri ndị Rom nke Mérida
Anyị ahọrọla imecha nyocha anyị nke àkwà mmiri Rome ama ama nke dị na ya Merida, obodo nwere ọmarịcha ihe nketa Latin. Ọ dịghị ihe na-erughị 790 mita ogologo na nwere 60 arcades. Ọ e wuru na XNUMXst narị afọ tupu Kraịst gafere Osimiri Guadiana.
Iji nye gị echiche nke nkà injinia nke ndị Rom, anyị ga-agwa gị na e wuru ya n'otu n'ime ebe osimiri na-emighị emi. Ọbụna ọ na-eji uru nke àgwàetiti eke na ala bụ diorites, nke nyere ntọala siri ike maka ụlọ ahụ.
Akwa mmiri a bụ akụkụ nke Mgbakọ ihe ochie nke Mérida, nke na-atọ ụtọ udi nke World Heritage. Otu n'ime ihe ịtụnanya na-eme ya bụ egwuregwu, nke circo, nke aqueduct nke Los Milagros, nke temple nke Diana ma ọ bụ Trajan's arch.
Ma, ma eleghị anya, akwa ọla nke set bụ Roman nkiri, wuru na afọ 15 tupu Kraịst dị ka architectural ụkpụrụ nke Vitruvian. N'ụzọ dị ịtụnanya, a gbakebeghị ya ruo mmalite nke narị afọ gara aga. Ka ọ dịgodị, ala kpuchiri ya. Agbanyeghị, taa, ka emechara nke ọma, ọ ka na-anabata ya Oge gboo aterlọ ihe nkiri nke Ememe nke obodo Mérida.
N'ikpeazụ, anyị egosila gị ụfọdụ àkwà mmiri ndị Rom a ma ama nke ka guzo. Anyị egosikwala gị ihe ncheta ndị ọzọ ị ga-ahụ n’obodo ndị ha dị. Agbanyeghị, enwere àkwà mmiri ndị ọzọ bara uru nleta gị. Dịka ọmụmaatụ, nke Salamanca ma ọ bụ nke Cangas de Onis, na-ahapụghị Spain. Na, ná mpụga obodo anyị, ndị nke Eurymenton n'obodo Gris oge ochie nke Aspendos, ndị nke mysis na Turkish obodo Adana ma ọ bụ nke Aquae Flaviae dere, na Portuguese Chaves. Ọ́ bụghị ihe ịtụnanya na ihe ebube ndị a dịgidere ruo ọtụtụ narị afọ?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » àkwà mmiri ndị Rom a ma ama